Virus သတ်လို့ရတဲ့ Software လေးတွေအကြောင်းဆွေးနွေး&#4 — MYSTERY ZILLION
Virus သတ်လို့ရတဲ့ Software လေးတွေအကြောင်းဆွေးနွေး&#4
November 2008 edited October 2009 in Antivirus & Virus
အခုဒီတော့ပစ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် Manual သတ်နည်းလေးတွေပြောကြတာပေါ့။ ဘယ် tool တွေသုံးလဲပေါ့။ ဘာ Anti-Virus သုံတယ်ဆိုတာထပ် ဘယ် tools တွေသုံးပြီ Virus သတ်လဲဆိုတာပညာဖလှယ်ကြရင်ပိုကောင်းမယ်ဗျ။ အခုကျွန်တော်အရင်ဆုံး စပြောပြမယ်ဗျ။ ကျွန်တော် tools ၃ ခုလောက်တော့သုံးမယ်ထင်တယ်။ ပထမတစ်ခုကိုအရင်ပြောပြမယ်။
ပထမတစ်ခုက ဟောဒီဆိုဒ်မှာ ဒေါင်းလုပ် ဆွဲလို့ရပါတယ်။ Autoruns ဆိုတဲ့ tool လေးပါ။ အဲဒီကနေ ဗိုင်းရပ်စ်ဝင်နေလား မဝင်ဘူးလား ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ Startup တွေလဲပိတ်လို့ရပါတယ်။
ဒုတိယ tool က india ကထုတ်တဲ့ RemoveRestrictionsToolv3.0Betachanh..exe ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလေးပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်နေရင် လက်တွေ့အသုံးချကြည့်ပါတော်တော်ကောင်းပါတယ်။
တတိယ tool ကတော့ Unlocker လေးကိုသုံးပါတယ်။ ဒီကောင်ကလဲ ဗိုင်းရပ်စ်သတ်တဲ့နေရာမှာ တစ်စိတ်တစ်ဒေသ အထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ သူကဘာတွေလုပ်ဆောင်လို့ရလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ delete လုပ်လို့မရတော့ရင် အဲဒီဆော့ဝဲလ်လေးတင်ထားရင် အဲဒီကောင်လေးနဲ့ဖျက်လို့ရပါတယ်။
ကဲနောက်နှောင် သူငယ်ချင်းများလဲ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ဗိုင်းရပ်စ် သတ်တဲ့ဆော့ဝဲလေးတွေဝေမျှပါဦး။
ကျွန်တော်က tune up 2007 သုံးတယ်ဗျ tune up ပေါ့ဗျာ..
process တွေကို ကြည့် ဖို့နဲ့ registry ကို အမြဲ၀င်ပြင်ဖို့ရာ... :39:
ကျန်တာတော့ ထူးထူးထွေထွေ မသုံးပါဘူး..
4.5 MB ပဲရှိတဲ့ Trojan Killer ဟာ adware , spyware, malware နဲ့ trojan တော်တော်များများကို သတ်နိုင်ပါတယ်။ သုံးရတာလွယ်သလို ကွန်ပျူတာနှေးသွားတာမျိုး လုံး၀မဖြစ်ပါကြောင်း ......... :67: :65:
လိုချင်ရင် ဒီမှာ ဒေါင်းပါ။
ကျွန်တော့် computer က တော်တော် လေး နိမ့်ပါတယ်... (upgrade လုပ်ဖို့ ပိုက်ပိုက် မရှိတာလည်းပါတာပေါ့).... တစ်ရက် Thayet Myo Hacking Day! ကိုက်တယ်.... လက်ဆော့လွန်းလို့ထင်ပါ့.... လျှာရှည်ပြီး Task Mgr, Regiedit တွေသွားဖွင့်တယ်... လစ်ရော....
ဒါနဲ့ window အသစ်လဲပစ်လိုက်တယ်.... နောက်ဆုံး ပေါ်(လိတ်တက်ပေါ့) Kaspersky 7.0 ကို ရက်ရက်ရောရောနဲ့ ငွေ 400 ပေးပြီးတင်ပစ်လိုက်တယ်... လိုက်စင်ကီးတွေကတော့ mr. ထွက်ပေါက် ဆီကနေ ကူးလိုက်တယ်... run လိုက်ရင် restart , scan လိုက်ရင် restart နဲ့ virus ပဲ ပြန်ကိုက်သလိုလို ၊ Hardware ပဲ မကောင်းသလိုလိုဖြစ်ရော.... ဒါနဲ့ ကျေးဇူးရှင် အဂ္ဂမဟာ ပဏ္ဍိတ၊ ဘဒ္ဒန်ဓ မဟာ ဂုရု၊ ဂုရု ကိုစေတန်ကိုမေးလိုက်မှပဲ memory မနိုင်ဘူးတဲ့..... Memory တိုးလိုက်ပါ တဲ့......... (ပိုက်ပိုက်မှ မရှိတာလို့)...... ဒါနဲ့ ပဲ အခု တော့ လာချင်တဲ့ Virus လာခဲ့... ဘာ anit - virus မှ မတင်တော့ဘူး.... window XP ခွေပဲ ၀ယ်ထားလိုက်တယ်.... သူပဲ ကိုက်နိုင်မလား....ကျွန်တော်ပဲ window လဲနိုင်မလား ပြိုင်လိုက်တော့မယ်....
ကြုံတုန်း ကြော်ငြာ၀င်လိုက်ဦးမယ်.... အဆင်ပြေမယ့် anti-virus လေး ပြောပေးဦး...ကျွန်တော့်စက်က
CUP - Pentium IV 2.4 GHz
Window - Window7(ငါကွ အသစ် တင်ထားတာ....400 တန်)
AGp - 128 (မလိုဘူးထင်တယ် ဂိမ်းနဲ့မွှားတွားလို့ .... sorry)
အဆင်ပြေနိုင်မယ့်ဟာလေးရှိရင်ပြောပေးကြဦးနော်.... download လုပ်ဖို့ Link လေးပါပေးရင် ထူးရှယ်ပေါ့..... Update လုပ်နည်းလေးပါပြောပြရင်တော့ ရောင်းမစွံတဲ့ ဒေါ်လေး အပျိုကြီးနှစ်ယောက်ပါ လက်ဆောင်ပေးမယ်.......\_:D/
ဒါဆို ဒီထဲသွားပြီး ကြိုက်တာသာဆွဲနော်။ အဒေါ်ကြီး နှစ်ယောက်တော့ ရော်လိုက်တော့နော် သူများကို
process explorer လဲကောင်းတယ်ဗျ။ နောက်ကွယ်မှာ run နေတဲ့ဟာတွေကို လမ်းကြောင်းပါကြည့်လို့ရတယ်။ နောက်တော့ company လဲကြည့်လို့ရတယ်။ company ကြည့်ပြီး (ဥပမာ - svchost ကို microsoft ကမဟုတ်ရင် ) End process လုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ။ လမ်းကြောင်းကြည့်ပြီးတော့ delete လုပ်လိုက်။ ပွဲသိမ်းပဲ (ဥပမာ - c:\_windows\_system32\_chrome.exe) pro တွေဆိုပိုတောင်သုံးတတ်ဦးမယ်ဗျ။
မရတော့ ဘူး ယူရမှာပဲ..... ဒီ bushes မြင်လို့ ဒီ rabbit ထွင်ထားတာ....
ဟားဟားဟား.... နာ့ အဒေါ် တွေ စွံ့ပြီကွ.......:))
Prevent Fake Emails: ========
- automatic delete anonymous (spam) messages in your mailboxes
- unlimited number of your mailboxes
- 95% of all anonymous (spam, viruses, etc.) emails will be deleted automatically
- trusted senders email lists of your senders
- encrypting info of your email accounts with AES cryptographic algorithm with 1024 bit key
- archives of every deleted (anonymous,spam) email in program installed directory
- control refresh time interval (in minutes)
- from which country you receive each email (normal and anonymous)
- file log for every session
Just run program before check your mailboxes. After that you will find in your mailboxes only normal (not anonymous)
letters. If you want to see anonymous letters just go to program's directory and you will see some directories with
names of your mailboxes. In each directory you will find anonymous letters for belong mailbox. You can add to trusted
sender lists any email address (normal or anonymous). It is necessary when program deleted some message, but you don't
want that. That's why in first days you must watch deleted emails and put senders of your choice to trusted senders lists.
All process can be automatically- just run program once, write you refresh time interval (in minutes) and hide it in
system tray. Program will check on every time interval your mailboxes and delete anonymous emails. After each session
program will make detailed report. You can see this report in her interface and in her log file.
ရေးရမှာ ပျင်းလို့..:D:D:D။ ဒီမှာ ဒေါင်းလို့ရပါတယ်။:65::65::65:
ကျနော့်မှာလည်း removable tools ရှိတယ်...ဒါပေမယ့်တခါတလေ မှ သုံးတယ်.....အဓိက သုံးတာကတော့cc cleaner ပါ..နောက်ပြီး unlocker နဲ့autorunkiller သုံးတယ်...ဘာantivirus software မှမတင်ထားတော ့ဘူး....အလုပ်ရှူပ်လို ့..အယုံကြည်လည်းမရှိတော ့ဘူးး။။။
ကိုယ် ့ကွန်ပြူတာ ကို ကိုယ်တယောက်တည်း ဆင်ဆင်ခြင်ခြင် သတိရှိရှိနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် ဘာအန်တီ ဗိုင်းရပ်စ် မှ တင်ထားစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်...နောက်ပြီးတော ့ကျနော်သုံးတာ ဗစ်စတာပါ...ဖိုင်းရားေ၀ါတော့၀င်းဒိုးဒီဖန်ဒါ တို ့လည်းဖွင့်ထားပါတယ်...အဲဒါတွေလည်းနည်းနည်းပါးပါးတော ့အသူံး၀င်မယ်ထင်ပါတယ်...အဲ...မသင်္ကာစရာတွေတွေ ့ရင်တော့တက်စ်မန်နေဂျာ တို့ရက်ဂျစ်စ်ထရီ တို မှာ ပိတ်လို်က်တယ်...ဒီလောက်ပါပဲ...သုံးရတာတော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်...
jurassic wrote: »
anti-virus များအား အယုံအကြည်မရှိဟု ကြားသိရသဖြင့် ၀မ်းမြောက်စွာ ထောက်ခံ အားပေးပါကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားအပ်ပါသည်......(စက်က နှေးပါတယ်ဆိုနေမှ သူ့အတွက် run ပေးနေရတာ ပိုကြာတယ်....)\_:D/
ကျနော်ကတော့ cpe17antiautorun လေးကိုအရမ်းသဘောကျနေတယ်။ကျနော်ပြတင်းပေါက်လေးကိုပိုးကူးမယ့်အန္တရယ်ကကယ်တင်ပေါင်းများပြီ
Drive တွေကိုဖွင့်ရင်တော့ Folderကနေပဲဖွင့်ပြီး
လိုအပ်ရင်တော့ Command Line ကနေတဆင့် attrib -r -a -s -h filepath ဖြင့်Virusတွေ့ရင်သတ်ပါတယ်။
ဒါမှမရရင်တော့Registry တို့ Taskmgr တို့ msconfig တို့ကနေ Virus ရဲ့Process တွေကို သတ်လိုက်ပါတယ်။
ခင်မျာ့တို့က ပြည်တွင်းဖြစ်လေးတွေလောက်ပဲ တွေးတာကိုးဗျ..
ပေါက်ခါနီး ဗုံးတွေကိုင်ထားတဲ့ သူ mz မှာ သုံးလေး ယောက်တွေ့နေရပြီ.. :d
ဝေါင်ဝေါင်ရှေးနော်.. နာ့နားမကပ်နဲ့... :d
pyaepxyoaung wrote: »
ကျနော်လည်း အဲဒါသုံးတယ်ဗျ.ဒါပေမယ့် ကျနော်သူငယ်ချင်းတယောက်ရဲ ့စက်ကို ဂျီတော ့ဗိုင်းရပ်စ်သတ်ပေးဖို ့usb drive ယူသွားပြီ သူံးလိုက်တယ် ပြန်လာပြီးတော့ကျနော့်စက်မှာ ပြန်တပ်ကြည့်လိုက်တော ့..အဲဒီကောင်ဗိုင်းရပ်စ်ရှိတယ်ထပြောတယ်...ဒါပေမယ့်မရဘူးးး.စက်ထဲ၀င်သွားလို့ပြန်သတ်လိုက်ရတယ်...
အရင်က anti-virus software လေးမှ မပါတဲ့ ကွန်ပျူတာက ပေါက်ခါနီး ဗုံးတွေ ကိုင်ထားတာနဲ့ အတူတူပဲ ဆိုတဲ့ ဆိုစကားလေး ကြားဖူးဘူးလား ...
khunmk ရဲ့ အဆိုပြုချက်ကို ငြင်းပယ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့ကွန်ပျူတာမှာ antivirus တင်မသုံးတာ ခြောက်လလောက်ရှိတော့မယ်
စက်ကိုတပ်တဲ့သူများ memory stick ကလည်း အများကြီးဘဲဗျ
အဲဒီ memory stick ထဲက virus တွေ့ရင်တော့ သိမ်းထားတာ
blackthorn wrote: »
ဒါပေါ့ ဒါပေါ့.. internet သုံးလား internet သုံးတယ် မထားဘူး ဆိုရင်တော့ လူမိုက်ဖြစ်သွားမယ်..။၊ internet မသုံးဘူး.. memory stick လေးတွေနဲ့ပဲ ဆိုရင်တော့ autorun.inf လေးတွေ ကာကွယ် တာ လောက်နဲ့ပဲ ဒီက ဘော်ဘော်တို့ okay နေမှာပေါ့ဗျ..။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါလည်း မှားမယ်ဗျ.. ):)):)) ဒီက အစ်ကိုကြီးတွေ မတွေ့ဖူးသေးလို့ နေမှာပါ။ ဘယ်လောက် window ဂရုကြီး ဖြစ်နေပါစေ .. ကျွန်တော် ဘာ anti-virus မသုံးဘူး ဘယ် virus မှ မထိဘူး ဆိုပြီး ဂုဏ်ယူနေတာ မှားမယ်ဗျ။ :67:
memory stick write protected ဖြစ်နေ.....
cmd မှာလည်းသတ်မရ.......virus ကိုကwrite only ပဲဲဖြစ်နေတယ်.....format လည်းမရ.....
သတ်လို ့ရတဲ့ software လိုချင်ပါတယ်........ကူညီကြပါအုန်း....
rapid shared ကမရဘူးဖြစ်နေတယ်.....broswer ပဲပါလာတယ်.....rar မပါဘူးဖြစ်နေတယ်.....ကူပါ၀ုန်း
ငါ့ဘော်ဘော်ကြီးရဲ့ Rapid ကနေဆွဲရင် ရိုးရိုးဆွဲလေ။ download manager မသုံးရဘူး။ ဒါမှမဟုတ်ဒီကိုသွားကြည့်လိုက်
this download session is expired......download again.....i tried thatalot of time .....မရဘူး....ကိုအိုင်းရေ......ပျင်းတယ်ပဲပြောပြော....
ည့ံတယ်ပဲပြောပြော[email protected] ကို send ပေးပါလားဗျာ..........ကျေးဇူးပြုပြီး.....zip နဲ ့ပဲ send send......yousendit.com
ကပဲ send send ......ပါဗျာ.....ကိုကြီးအိုင်းကချောပါတယ်ဗျာ.......:)
ကျနော့ signature က go go go ဆိုတဲ့ဟာလေး click ပြီးသွားလိုက်နော်။ တခု မရတခု စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့။ ကျနော် တော့ဆွဲလို့ရတယ် ဘာ site နဲ့ဆွဲသလဲတော့မေ့သွားပြီ။ တချို့ site ကဆွဲလို့ရတယ် Rar ဖြေတော့ error ပြတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့ site တော့ရှိတယ်။
upload site ပြောင်းမတင်ပေးနိုင်တာကတော့ ခွင့်လွှတ်ပေးပါ။ အီဖေကိုယ့် computer က speed မြန်လွန်းအားကြီးလို့ upload တင်ပေးနေ 2010 မှပြီးလိပ်မယ်
ရွာသူနှောင့်ယှက်တာနဲ ့တူတယ်ဗျား..........အဟီး......ရွာသူဆိုရင်တော့ ကိုအိုင်း အ ကြိုက်ပေါ့
morning ကတည်းက download အခုထိမပြီး............ဟီးဟီးဟီး....
ကူညီကြပါအုံး...ကျနော်စက် ၀င်းဒိုးအတက်မှာ.. (can not find script file "C:\_WINDOWS\_System32\_NoeNoejetma.vbs" ) ဆိုတဲ့ virus ကိုတွေ့နေရတယ်...kav7နဲ့လည်းမသတ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်...ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြကြပါအုံးဗျာ...ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်စောင့်နေပါမယ်ခင်ဗျာ....
အဲဒီလိုပေါ်ရင်တော့ Virus ရှင်းသွားလို့ပါ။ msconfig မှာ အဲဒီ NoeNoejetma.vbs ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုသွားရှာပြီးဖျက်လိုက်ပါ။ နောက်ပြီး StartMenu>Startup ထဲမှာလဲသွားရှာပြီးရှိရင်ဖျက်လိုက်ပါ.
Happy Birthday Virus ကိုဒီအချိန်မှာတော်တော်များများနိုင်ကုန်ကြပါပြီ .... ဒါလေးကတော့မနိုင်သေး ... မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပါ .. ဒီ package လေးကိုဒေါင်းလိုက်ပါ .... :103:
ကျွန်တော်ဆီမှာ noenoejetma.vbs ဆိုတဲ့ virus ရောက်လာပြီကတည်းက flie တွေလဲ ဖွင့်မရ virus program တွေလဲဖွင့်မရ window mediaplayer ကြီးလဲ An internal application error has occurred ဆိုတဲ့ ဖွင့်လိုက်တိုင်းတက်နေတယ် နောက်ပြီးအသစ် virus program အသစ်ထပ်တင်မယ်ဆိုတော့လဲ ဖွင့်မရဖူးဖြစ်နေပါတယ်
ကျွန်တာ်ဆီမှာ mcAfee 8.5 တော့ တင်ထားတာရှိတယ်ဗျ သူနဲ့ virus စစ်လိုက်တိုင်း အဲဒီ noenoejetma.vbs ကြီးပဲမိမိနေတယ်ဗျာ
အဲဒါသတ်တဲ့ software HJTInstall ကိုသုံးမယ်ကျန်တော့ အဲဒါလဲ ဖွင့်လို့မရဖူးဗျာ
ကူညီကြပါအုံးဗျာ ဖိုင်တွေလဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်ခံနီးပါပြီဗျာ (:((:((
sai kyaw swar wai wrote: »
ဟာ...ကိုစိုင်းအဒေါ်တွေ စွံ သွားပြီးလား...ဝမ်းနည်းလိုက်တာ..အဟင် ့..
နာရည်၇ွယ်ထားတာလေး တော ့လစ်ပြီ....
phyowaimg wrote: »
ဒီနေရာလေးမှာ ပြောထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ... တစ်ချက်လောက်လေ့လာကြည့်ပါ.....
အစဉ်ပြေသွားမှာ ပါ တနည်းနည်းနဲ့..:D:D:D
မကောင်းကျောင်းပို့တဲ့ ဇူးဇူး ရေ.... မှားမယ်နော်... နောက်မှနောက်တမရနဲ့... အကြံအစည် တစ်ခုခုတော့ရှိရမယ်..... ဒီကိစ္စ ကလွယ်လွယ်တော့မဟုတ်ဘူး Thread ဖွင့်လိုက်ရမား Thread ဖွင့်လိုက်ရမလား.....:P:P:P
ဒေါင်းတော့ဒေါင်းလိုက်ပါတယ်... Activation code တောင်းနေလို့ ကူညီပါအုံး..
စွမ်းအားပြည့် ပညာရှင် ဆိုလို့ ပါ .. လန့်စရာကြီးပဲဗျ ..
ကျွန်တော်ကတော့ တနေရာပဲ စွမ်းအားပြည့်နေချင်တယ် ..
စတာပါ ဒီနေ့တော်တော်အားယားနေလို့ .. လျှောက်ဖတ်ကြည့်တာ.. မရေးဖြစ်တာလဲကြာလို့ပါ ..
istenin ကျွန်တော်ဘယ်သူဆိုတာသိမှာမဟုတ်ပါဘူး ညင်းညင်းညင်း
for more secure and more faster computer
Anvir Task Free include
1.startup manager: with startup guard, and ie BHO. when delete entry it can delete executable file(Such as virus). Most complete info can be present in table.
2.Task & Process Manager: full and force control of task and process, view all info, change priority.
3.Service Manager: full service control, view critical info such as load, description
(service link with startup auto solved)
4.Log: list all process in system (you can also get hijackthis pro log)
5.Windows enhancement: Such as hide to tray, transprent, floating icon, recent list for more
6.Performance enhance: By the way of change background process priorities (i think it more smoother then similar programs)
7.XP Tweaker: Function like tweak in such as Tuneup Utilities (Caution use with care, set restore point is better)
As my opinion it's ultimate mem optimizer with autotuning.
Advaced System Care Free (Plus Smart Defrag)
Just like function of most paid program in tuneup function, withalittle exception at free price. Functions i like most is spy ware removal and security defense, it quit reliable and easy with internet threat. Before you use autocare, scan system optimization manually and set exception (such as autokill program). Almost forget!ahandy tools: internet booster in utilities, just set the connection speed and optimize and feels the different.
Smart defrag: speed demon with handle defragments, also include auto and scheduling function.(smart defrag is isolated module)
latest version are easy download able at download.com
hopefully will make you less problem
အင်း .............မဖြစ်ကြသေးလို့ပါ။ တော်တော်များများရဲ၀ံ့နေကြသေးတာ။ ကျနော်လည်း အရင်က အဲလိုပါပဲ။ စက်လေးတယ်ဆိုပြီး antivirus မတင်ပါဘူး။ အင်တာနက်သုံးရင် သတိတော့ထားတာပေါ့။ အရင်ကဆို ကျနော့်စက်က ၀င်းဒိုးခဏခဏတင်ရပါတယ်။ ၀င်းဒိုးတင်ရလို့စိတ်မပျက်ပါဘူး။ အလုပ်တော့ပျက်တယ်။ အချိန်ပေးနေရတယ်။ kesper ကလည်းစိတ်မချရပါဘူး။ norton 360 ကစိတ်ချရတယ်ဆိုပြီး စင်္ကာပူကိုမှာတော့ စျေးက တော်တော်ကြီးနေတယ်။ မြန်မာငွေ ခြောက်သောင်းလောက်ကျမယ်။အဲဒါနဲ့ အခုတော့ avest 4.8 တင်ထားတယ်။ problem မရှိတာတော်တော်ကြာသွားပြီ။ http//www.avest.com မှာဒေါင်းရုံပါပဲ။ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ free ပါပဲ။ home edition ကို ရွေးပါ။ စစချင်းရက် 60 ပေးမယ်။ mail လိပ်စာပေးလိုက်ပြီး licen key တောင်းလိုက်ပါ။ ပြီးရင် active လုပ်လိုက်ပါ။ 1 နှစ်စာလုံလောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်လေးပုံမှန်ချိတ်ပေးရင် သူ့ဘာသာသူ update လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ mz မှာသုံးသူအားလုံးကတော့ အင်တာနက်သုံးကြမှာပါ။ ဘာ antivirus မှမတင်ထားပဲနဲ့တော့ ကိုယ့်စက်ကိုပစ်မထားကြပါနဲ့။ ကိုယ့်ရည်းစားကို အမြဲတမ်း kiss ပေးသလိုမျိုး ကိုယ့်စက်ကလေးကိုလည်း အကာအကွယ်လေးပေးထားသင့်ပါတယ်။
thank for cautions, nothing can replace mainstream antivirus software yet as they advertised. i also use avast free home edition plus threatfire, it's light and easy configurable, when you doesn't need just reduce sensitivity level. but it's still have sometime for manual cleaning(most are vbs), it would be still need to use little handy tools too.
thank for cautions L Mg Aye, nothing can replace mainstream antivirus software yet as they advertised. i also use avast free home edition plus threatfire, it's light and easy configurable, when you doesn't need just reduce sensitivity level. but it's still have sometime for manual cleaning(most are vbs), it would be still need to use little handy tools too.
အယ်လ်မောင်အေး wrote: »
ကျွန်တော်ယူဆတာကတော့တစ်မျိုး virus ၀င်ဖို ့အဓိကလမ်းကြောင်းကနှစ်ခုပဲရှိတယ် ပထမက Removable Device ကနေရယ် နောက်တစ်ခုက internet ကနေရယ်ကျွန်တော်ကအင်တာနက်အမြဲမသုံးတော့ပြဿနာမရှိဘူး Removable device ကနေကြတော့ကျွန်တော်ကတခြား OS တစ်ခုသုံးတော့အဲဒါနဲ ့ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်တယ် မသင်္ကာတဲ့ဖိုင်တွေ ့ရင်ဖျက်လိုက်တယ်
အားအားလျားလျား ၀င်ရေးကြည့်တာပါဗျာ... ကျွန်တော်က အခုမှ ၀င်လာတာပါ... မိတ်ဆက်တာတော့ မဟုတ်ဘူးနော်... ကျွန်တော်လဲ Virus ဆိုတာကို အလွန် နှစ်သက်တဲ့သူပါ...
ကျွန်တော့်အမြင်လေးတစ်ခုကို ပြောချင်ပါတယ်... တချို့တချို့တွေက Antivirus ကို ဘာအကောင်းဆုံးလဲလို့ ပြောကြတယ်.. ကဲ... သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတို့ စဉ်းစားကြည့်ပါ...
ကျွန်တော်တို့ သူငယ်ချင်းတို့တွေသာ Virus ရေးမယ့်သူဆိုရင် ဘယ်လို စိတ်ကူးမလဲ လက်ရှိ kaspersky နာမည်ကြီးတယ်.. ကျွန်တော်သာဆို သူ့ကို ရှောင်ရေးမှာပဲ... ဒီလိုပဲ.. နာမည်ကြီးလာရင် လုံခြုံရေးပိုင်းက စိတ်မချရတော့ဘူး.. ကျွန်တော် Avast ကို သုံးတာ ဘာနာမည်မှ မရှိခင်ကတည်းက... ပေါ့တယ်..သွက်တယ်.. စက်နှိမ့်နှိမ့်လေးအတွက် အဆင်ပြေတယ်... ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့် Avast ပေါ်မှာ ၁၀၀% ယုံကြည်မှုမရှိပါဘူး.... မယုံလို့မသုံးဘူးလားတော့ မမေးနဲ့သုံးတယ်ဗျ... ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူရှိနေတော့ အလုပ်လုပ်ရတာ နည်းနည်းသက်သာတယ်...
သူငယ်ချင်းတို့လဲ Antivirus မတင်ထားတာ ကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် တင်ထားစေချင်ပါတယ်.. အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်စက်နဲ့အဆင်ပြေမယ့် Antivirus ကို ရွေးချယ်ကြပါ... ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အခုအခါမှာ မြန်မာနိုင်ငံက Virus ရေးတဲ့သူတွေလဲ ရှိနေပြီ... အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ၀င်လာနိုင်တယ်.. ကြိုတင်ကာကွယ်မှုက ပိုကောငး်ပါတယ်ဗျာ...
Avast ကို အားပေးတယ်.. BitDenfender ကိုလဲကြိုက်တယ်.. ဒါပေမယ့် စက်က သူ့အတွက် အလုပ်လုပ်ပေးရတာနဲ့ ကိုယ်သုံးရတာနဲ့ မတန်ဘူး.. ဟီးဟီး
Avast က ကောင်းတော့ ကောင်းပါတယ်. ဒါပေမယ့် သင်တန်းက စက်တွေကို မြင်ကတည်းက Avast ဆိုတော်တော်ကို လန့်သွားပြီ။ ပုံမှန် update လဲ မလုပ်နိုင်ရော. ဖြစ်ပျက်သွားတာ အန်တီဗိုင်းရပ်စ်ခမျာ သနားဖို့တောင်ကောင်းတယ်.. ရှိသမျှ ဗိုင်းရပ်စ်တွေ ပြုသမျှ နုပြီးခံနေရရှာတာ.. ) သင်တန်းမှာ စတစ်ထိုးပြီးလို့ အိမ်ပြန်လာရင် မစစ်လိုက်နဲ့ အနည်းဆုံး 300 ပတ်ချာလည်ရှိတယ်. တစ်ကောင်မှ မတွေ့တာ အံ့ရောဗျာ..ပြီးတော့ ဗိုင်းရပ်စ်က အန္တရာယ်ပေးနိုင်လို့ restart ချပါဆိုတဲ့စာကလည်း အချည်ပေါက်စရာပဲ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် free antivirus ကို သုံးချင်တယ်ဆို AVG နဲ့ avir ကိုသုံးသင့်တယ်လို့ထင်တယ်.. AVG က နာမည်ရှိတယ်.. စက်နဲနဲလေးချင်တယ်.. avir ကတော့ နောက်ပိုင်းနာမည်တက်လာတယ်. စက်ဒီလောက်မလေးဘူး ဒါပေမယ့် သူက ဗိုင်းရပ်စ်မိရင် တစ်ချိန်လုံးအော်နေတတ်တယ်.. နားခံနိုင်ရင်တော့ သုံးပေါ့.. ကျွန်တော်ကတော့ kaspersky အားပေးသူလေ.
ကျွန်တော်ကတော့ Kaspersky ကိုပဲခုနောက်ပိုင်းသုံးတော့တယ်။ အရင်ကတော့ norton ကိုပဲသုံးခဲ့တာပေါ့ flashy ဗိုင်းရပ်ကစလို့သူကမမိတော့တာကိုသတိထားမိလို့ ပြောင်းလိုက်တာ။ ဒါပေမဲ့ support လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာ norton ကိုခုထိဘယ်သူမှမမိသေးဘူးလို့ထင်ပါတယ် virus တခုခြင်းရဲ့ အကြောင်းရာတွေကို အပြည့်အစုံဖော်ပြပေးထားနိုင်တယ်လေ။ tool နဲ့ utility တွေလဲ download လုပ်ယူလို့ရသေးတယ်။
July 2009 edited July 2009 Banned Users
အခုဒီတော့ပစ်မှာ ဗိုင်းရပ်စ် Manual သတ်နည်းလေးတွေပြောကြတာပေါ့။ ဘယ် tool တွေသုံးလဲပေါ့။ ဘာ Anti-Virus သုံတယ်ဆိုတာထပ် ဘယ် tools တွေသုံးပြီ Virus သတ်လဲဆိုတာပညာဖလှယ်ကြရင်ပိုကောင်းမယ်ဗျ။
ကျွန်တော်ကတော့ virus ဝင်လာရင် mother board က CPU ကိုခွါပြီး အောက်ခြေမှာ ဆားလေးနည်းနည်းသုတ်ပြီးတော့သတ်တယ် မဆိုးဘူးဗျ
အဲ နောက်တစ်နည်းက Hard Disk ကိုဖြုတ်ပြီး အပေါ်ကနေ သံလိုက်တုံးလေးနဲ့နှစ်ချက်သုံးချက်လောက်ပွတ်ပေးလိုက်တယ် ရှိပြီးသား virus လည်းမနိုးသောအိပ်ခြင်းနဲ့အိပ်ပါလေရော
နောက်များလည်း ဘယ် virus မှမကိုက်စေရဘူးစိတ်ချ:D
chartaik wrote: »
ကျွန်တော်လဲအစ်လိုပဲဖြစ်နေတာ can not find script file "C:\_WINDOWS\_System32\_ုkolay.vbs" လိုပေါနေတယ်
July 2009 edited July 2009 Registered Users, Moderators
အဲဒါက ဗိုင်းရပ်စ်သေသွားလို့ဗျ။ run box(win+r) မှာ msconfig လို့ရိုက်ထည့် startup ကိုသွားပြီး အဲဒီ kolay.vbs ကိုအမှန်ခြစ်ဖြုတ်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခါအဲဒီ error မတတ်တော့ပါဘူး။ msconfig လို run နေတာကို ပိတ်ဖို့ဖွင့်ဖို့အတွက် autoruns ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲလ်လေးကို စမ်းသုံးကြည့်စေလိုပါတယ်။ အောက်ကလင့်ခ်မှာဒေါင်းလုပ်သွားဆွဲနိုင်ပါတယ်။
I had used Internet but never used antivirus software.I think using antivirus software decreased your computer speed so I never used it.
clara wrote: »
antivirus တခု တော့တင်ထားသင့်ပါတယ် အဲဒိလိုမှမတင်၇င် လက်နက်မပါပဲစစ်မြေပြင်ထွက်သလိုဖြစ်မှာပေါ့ ဗျာ ( အဲ လက်သီးနဲ့ထို်း၇င်ထိုး ဒါမှမဟုတ် ထွက်ပြေးလို့တော့၇တယ်နော်:D:D:D )
အဲဒီလို Windows တက်တိုင်းမှာ .vbs file extension တွေနဲ့can not find script file "xxxxxxxx" လို့ပေါ်နေရင် ဒီလိုဖြေရှင်းလို ့ရပါတယ်. Start ကနေ Run ကို နှိပ်ပြီး regedit လို့ရိုက်ပြီး Registry Editor ထဲ၀င်လိုက်ပါ ပြီးရင် ဒီလမ်းကြောင်းကို ရောက်အောင်သွားပါ
My Computer\_HKEY_LOCAL_MACHINE\_SOFTWARE\_Microsoft\_Windows NT\_CurrentVersion\_Winlogon ကို သွားပြီး ညာဘက် value pane မှာ Userinit ဆိုတဲ့ String Value မှာ Double Click နှိပ်ပြီး C:\_WINDOWS\_system32\_userinit.exe, ဆိုတဲ့ Default value data နောက်မှာ ရှိတဲ့ data စာသားတွေ ဖျက်လိုက်ပါ ပြီးရင် OK နှိပ်ပြီး နောက် Registry Editor ကို ပိတ်လိုက်ပါ ပြီးရင် Windows ကို Restart လုပ်လိုက်ရင် အပေါ်ကလို error ကျလာမှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး များသောအားဖြင့် .vbs extension နဲ့file တွေဟာ Windows Script Host Application နဲ့Run ဖို့ရေးထားတဲ့ virus file တွေ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် (အကုန်လုံးကို မဆိုလိုပါ) အကောင်းဆုံး အဲဒီလို .vbs files တွေ run မနေစေဖို့My Computer (or) My Documents ဖွင့်လိုက်ပါ ပြီးရင် Tools menu ထဲက Folder Options ကို ခေါ်လိုက်ပါ.:101: နောက် File Types tab ကို သွားပြီး VBS Extensions မှာ ကလစ်နှိပ် ပြီးရင် Delete နှိပ်ပြီး OK နဲ့ထွက်လိုက်ပါ နောက်ဆို .vbs extension နဲ့run တဲ့ virus files တွေရဲ့ရန်က ကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်.:67:
လူနောက် wrote: »
ကောင်းလိုက်တာဗျာ တယ်တော်လိုက်တဲ့ ပညာရှိဗျာ (သေ၇င်ပုပ်စော်နံလိုက်မဲ့ဖြစ်ချင်း :o)
ကျွန်တော်ကတော့ portable တွေပဲသုံးဖြစ်တာများတယ်ဗျ
setup ဖိုင်တွေက တချို့ဗိုင်း၇ပ်တွေက အင်စတောအလုပ်မခံဘူးလေ
ဒိတော tuneup 2009 portable /xy eplorer /autorun/dtaskmanager/processer explorer/unlocker တွေကို portable ၇ှာပြိး stick ထဲထည့်ထား၇တယ်
တချို့ antiviurus တွေကိုလဲprotable ၇ှာထား၇တယ်လေ(http://www.mysteryzillion.org/forums/member.php?u=4041 ကောင်းမှုပေါ့ဗျာ)
tuneup ကိုregistery ထဲ၀င်ယုံပဲသုံးတယ် process ကို end task လုပ်တာကြတော့ process explore /dtaskmanager တို့လောက်မကောင်းဘူးဗျ
သိပ်တော့ဖြေ၇ှင်း၇တာ မလွယ် ပေမဲ့ တအားကြီးတော့မခက်ဘူးပေါ့
ဗီုင်း၇ပ်တကယ်ပျင်းလာ၇င်တော့ အဲဒီကောင်းတွေနဲ့ ့ကျွန်တော်မသတ်တော့ဘူးမျို့